प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाउलान् कि एमालेले फेर्ला ड्रेसकोड ? – Everest Dainik
प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाउलान् कि एमालेले फेर्ला ड्रेसकोड ?
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अचेल टोपीमा देखिनुहुन्छ ।
अस्ति भर्खरसम्म दुर्लभ जस्तै भए पनि ९प्रधानमन्त्री भएका बखत बाहेक० हिजोआज उहाँको शीरमा टोपी प्राय टुट्दैन । जसले गर्दा जेल लगाएर सपक्क लप्काइएको प्रचण्डको कपाल टोपीले छोपिदिन थालेको छ । धेरैजसो भादगाउँले र कहिलेकाहिँ ढाका टोपी उहाँको वर्तमान ‘ड्रेसकोड’को अभिन्न वस्तु बनेको छ ।
उहाँलाई नै पछ्याएका हुन वा संयोग मात्र हो माओवादीका केही नेताका शीरमा पनि हिजोआज ढाकाटोपी ढलक्क ढल्किन थालिएको छ ।
लवाईखवाई वयक्तिका विशुद्ध रुची र छनोटका कुरा हुन् । तर यसमा चासो चाहिं अरुको धेरै हुन्छ । कसैले लगाएको लुगा सुहायो कि सुहाएन वा कति महंगो सस्तो वा ब्राण्डेड हो भन्ने कुरा अरुका लागि चासोको विषय बन्छ । अझ त्यसमाथि देशका प्रभावशाली नेताको लवाइखुवाइमा सबैको चासो देखिनु स्वभाविक हो ।
फेरिँदो समय अनुसार लवाइखवाई आवश्यकतासँगै फेसन वा सन्देशको सूचक पनि बन्न थालेको छ । लुगाले जाडोमा न्यानो वा गर्मीमा शीतलता मात्र दिदैन । सुहाउने मात्र पनि होइन अब त लुगा सन्देश दिने वस्तु पनि बनेका छन् । कुन ब्राण्ड, कुन खेलाडी वा क्लबको समर्थक अनि के सन्देश दिन चाहन्छ भन्ने कुरा पनि लुगाबाट बुझ्न बुझाउन थालिएको छ । विभिन्न सन्देश वा गीतका स्थायी वा अन्तरा, नारा स्लोगन र चित्र कोरिएका लुगा लगाउने क्रम संसारभरि नै बढ्दो छ ।
नेता, अभिनेता, कवि कलाकार खेलाडी जस्ता सार्वजनिक व्यक्तिको लवाईखुवाई हिँडाई बोलाईको विशेष अर्थ रहन्छ । उनीहरुका फ्यान भनौं वा समर्थकले उस्तै हाउभाउ देखाउन र पहिरन लगाउन मन पराउँछन् ।
यो कुराको प्रयोग माओवादीले पनि धेरै गरेको थियो । जस्तो प्रधानमन्त्री भएकै बखत पनि त्यसअघिको परम्परा तोड्दै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले दौरा सुरुवाल लगाउनु भएन, भलै भादगाउँले टोपी भने उहाँहरुले लगाउनुभयो । त्यसैगरी गरगहना र सौन्दर्य प्रशाधनका सामाग्री माओवादी नेता र नेतृले मात्र होइन कार्यकर्ताले पनि प्रयोग गरेनन् ।
संविधानसभामा आइसकेपछि पनि माओवादीका सवै सांसदले खरानी रङको कोट पाइण्ट लगाए । जसले गर्दा उनीहरु अलग्गै चिनिन्थे ।
त्यसो त प्रचण्डले अस्ति दसैँमा टीका लगाएर धेरैलाई ‘चकित’ पार्नुभएको थियो । निधारभरि रातै टीका लगाएको र परिवारलाई टीका लगाइदिएको तस्बिरबाट उहाँले केही सन्देश दिन पक्कै खोजेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
नियमितजसो टोपी लगाउन थालेको अल्लिपछि प्रचण्ड परिवारसहित हिन्दु तिर्थस्थल देवघाट पनि पुग्नुभयो । हुन त भौतिकवादमा मात्र विश्वास गर्छौँ भन्ने ‘कम्युनिष्ट’ नेताले प्रकारान्तरमा ढुंगामा ‘ईश्वर’ को आत्मा भेटाउने विषय नयाँ भने होइन ।
एमाले र माओवादी अब नयाँ सरकार बनाउने मात्र होइन पार्टी एकता गर्ने नै तयारीमा छन् । एकताका लागि अनेकौ चुनौती र अफ्ठ्याराहरु छन् भनेर स्वयम ती दलकै नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक विषय र पद व्यवस्थापनलाई मुख्य अफ्ठ्यारो मानेका छन् ।
एमालेले संसदीय दलमा निर्णय गरेरै पुरुष सांसदका लागि दौरा सुरुवाललाई ड्रेस कोड बनाएको सन्दर्भमा यो कुरा पेचिलो भन्दा पनि टेसिलो हुनेछ कि पार्टी एक भएपछि प्रचण्ड पनि संसदमा दौरा सुरुवाल लगाएर जालान् रु
हुनत एकतापछिको पार्टीको संसदीय दलमा दौरा सुरुवाल वा साडी चोलीकै ड्रेसकोड रहन्छ भन्ने पनि छैन रु नीति सिद्धान्त र व्यवहार फरकफरक रहे पनि दुई दलले सिंगो पार्टी नै एक बनाउने निर्णय जो गरिसकेका छन् । – उज्यालाे अनलाइनबाट साभार